न्यूज २४ र रवि लामिछानेबीच द्वन्द्व चर्कियो ,कारण यस्तो छ ? – Saurahaonline.com
न्यूज २४ र रवि लामिछानेबीच द्वन्द्व चर्कियो ,कारण यस्तो छ ?
काठमाडौं : न्यूज २४ बाट प्रशारित लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’ लाई टेलिभिजन र सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेबीच संघर्ष सुरु भएको छ । रविले बिहीबार न्यूज २४ सँगको करिब पाँचवर्षे सहकार्य टुङ्ग्याएसँगै कपिराइटको विवाद उब्जेको हो ।
रविले ‘सिधा कुरा’ केही समयको विश्रामपछि नयाँ सोच र स्वरुपमा आफूले पुनः सञ्चालन गर्ने टेलिभिजन स्क्रिनबाटै घोषणा गरेका थिए । उनले फेरि छिट्टै आउने भन्दै शनिवार सामाजिक सञ्जालबाट ‘सिधा कुरा’ का लागि नयाँ सम्पर्क नम्बरसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
न्यूज २४ मा ‘सिधा कुरा’ साताको तीन दिन ९आइत, मंगल र बिहीबार० राति ८ स् ४५ बजे प्रसारण हुन्थ्यो । नयाँ प्रस्तोताको खोजी गरिरहेको टेलिभिजन आज आइतबारसहितका केही श्रृंखला उपलब्धबाटै सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ ।
तर, लामिछानेसँग दाँजिने र उनका शुभेच्छुकले चर्को आलोचना गर्न सक्ने भएकाले उपलब्ध प्रस्तोता चर्को दबाबमा रहेको न्यूज २४ का एक डेस्क एडिटरले बताए ।
यता, लामिछानेले भने काम गरेको संस्थाप्रति सम्मान रहेको भन्दै यसबारे तत्काल थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
न्यूज २४ ले भने आफूसँग सामान्य छलफलसमेत नगरी एकलौटी र दुरासयपूर्ण रुपमा लामिछानेले ‘सिधा कुरा जनतासँग’को कानूनी अधिकार हत्याएको आरोप लगाएको छ ।
झुक्याएर त्यसो गर्ने हो भने सबै टेलिभिजनका सबै कार्यक्रम प्रस्तोताले कब्जा गर्ने र संस्थाबाट बाहिरिने प्रबृत्ति बढ्ने टेलिभिजन व्यवस्थापनको भनाइ छ ।
रविले केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाल टेलिभिजनबाट ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालले कार्यक्रम रोकेपछि रविले ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’लाई परिमार्जन गरेर न्यूज २४ मा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम चार वर्षसम्म चलाएका थिए ।
नयाँ टेलिभिजनको नेतृत्व गर्ने गरी रवि न्यूज २४ बाट बाहिरिएलगत्तै ‘सिधा कुरा’लाई लिएर उनी पूर्व संस्थासँग विवादमा तानिएका हुन् । तर, उनी आफू विवाद गर्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् ।
शनिवार स्टाफ मिटिङमा न्यूज २४ टेलिभिजनको सञ्चालक संस्था नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानलका अध्यक्ष अनिल जोशीले कुनै पनि हालतमा ‘सिधा कुरा’ नछोड्ने भन्दै आवश्यक परे कानूनी लडाइँमा पनि जाने बताएका थिए ।
दुई वर्ष अगाडि नै ‘सिधा कुरा जनतासँग’को स्वामित्व कानूनीरुपमा आफ्नो बनाएका रवि संभावित न्यायिक लडाइँमा माथि पर्न सक्ने कानूनकर्मीको बुझाइ छ ।
‘कुनै पनि प्रस्तोताले आफूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको कानूनी अधिकार सम्बद्ध संस्थासँग सहमति लिएर गर्यो या नगरी भन्ने कुरा ‘नैतिक’ प्रश्नको विषय हो । उसले विधि, प्रक्रिया पुर्याएर लिएको छ भने उ स्वतः माथि हुन्छ नै’ अधिवक्ता रामहरि नेपालको भनाइ छ । मुद्दा–मामिलामा नैतिकभन्दा कानूनी कुराले स्वतः मान्यता पाउने उनले बताए ।